सरकारले तोक्यो अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ ३, २०७४ | 433 Views ||
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा अस्थायी राजधानी तोकिएको छ ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी अस्थायी केन्द्र तोकिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
विभिन्न दलका नेता र स्थानीय स्तरमा प्रदेश राजधानीका विषयमा फरक फरक धारणा र दवाव आन्दोलतहरु भइरहेको बेला सरकारले प्रदेश राजधानी तोकेको हो ।
यसैबीच मन्त्री परिषदको बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु चयन गरेको छ । नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुमा प्रदेश १ मा प्राध्यापक गोबिन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ल छन् ।
कस्तो छ प्रदेश प्रमुखहरुको राजनीतिक र व्यवसायिक पृष्ठभूमि ?
धनकुटा घर भएका सुब्बा पेशाले प्राध्यापन गर्छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विभागमा रहेका सुब्बा नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत हुन् ।
प्रदेश- २ : रत्नेश्वरलाल कायस्थ
नेपाल सरकारका सचिव भइसकेका पूर्व प्रशासक हुन् । उनी पहिलो संविधान सभाको सदस्य थिए, तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट। पहिलो मधेश आन्दोलनपछि फोरम प्रवेश गरेका उनी पार्टीका सचिव समेत भए ।
माइती नेपालको अध्यक्ष रहेकी कोइराला पनि पूर्वमन्त्री हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा सहायकमन्त्री भएकी थिइन् । चेलीबेटी बेचबिखन र उनीहरुको पुनस्र्थापनामा भूमिका खेलेकी कोइराला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भन्दा केही समयअघिमात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकी हुन्।
प्रदेश- ४ : बाबुराम कुँवर
प्रदेश-४ का लागि प्रमुख नियुक्त गरिएका कुँवर लामो समय कानूनी व्यवसायमा बिताएका व्यक्ति हुन् । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)को अध्यक्षसमेत भइसकेका बरिष्ठ अधिबक्ता कुँवर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिबक्ता थिए ।
प्रदेश- ५ : उमाकान्त झा
झा मन्त्री समेत भइसकेका पूर्व प्रशासक हुन् । झा २०७० को संविधान सभा निर्वाचन गर्न गठन गरिएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा मन्त्री थिए । नेपाल सरकारको सचिव भइसकेका झा हाल राष्ट्रिय जनता पार्टीको महामन्त्री छन् ।
प्रदेश- ६ : दुर्गाकेशर खनाल
पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति चर्चामा नरहे पनि खनाल मध्यपश्चिम क्षेत्रका पुराना कांग्रेस नेता हुन् । सुर्खेत निवासी खनाल २०४८ को पहिलो आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनी अहिले जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
प्रदेश- ७ मोहनराज मल्ल
पञ्चायतकालीन संसद राष्ट्रिय पञ्चायतमा कैलालीबाट चुनिएका मल्ल पञ्चायतभित्र उदारवादी पञ्चका रुपमा चिनिन्थे । बहुदलकालीन र ०६४ को संविधान सभा चुनाव समेत राप्रपाबाट लडेका उनी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
Prev५ नं. प्रदेश राजधानीको निर्णय सच्याउन महराको चेतावनी
Nextराष्ट्रियसभाका लागि एमाले र माओवादी सीट बाँडफाँड